Myanmar Gays Heaven: လူစုံပဲဗျာ......ဘယ်သူတွေလဲတော့မသိဘူး ပို့ပေးတာ ကျေးဇူးဗျ
လူစုံပဲဗျာ......ဘယ်သူတွေလဲတော့မသိဘူး ပို့ပေးတာ ကျေးဇူးဗျ
Posted by Hot Boy at 7:38 AM
မုံရွာကရှိလား ကျနော်က bot
မိန်းမမဆန် အရပ်54
105 lbs,အသက် ၂၈
bellyberry1500 ကိုအပ်ပေးပါဗျ မုံ၇ွာကပါ ရုပ်ချောတယ် အရပ် ၅ ပေ ၈ ver rloe
sex လုပ်ချင်နေတယ် စိတ်ဝင်စားရင် ဖုန်းနံ ပါတ်နှင်. အကောင်.ရေးထားခဲ့ပါဗျ
Anonymous November 24, 2013 at 10:14 AM
chanchan chan August 17, 2014 at 2:38 PM
မုံရွာကမှန်ရင် ၄၀၀၅၃၄၆၂၉ ကို massage ပို့ပါ
Anonymous August 24, 2014 at 5:02 AM
Anonymous December 1, 2013 at 9:36 PM
kyte tel byar
myitkyina က h m friends တွေနဲ့ တွေ့ ချင် ပါ တယ်။ ။ရှိရင် ဆက် သွယ် လိုက်။
စောင့် နေ တယ် နော်။ ။
Anonymous January 7, 2014 at 11:17 AM
Joe jo March 10, 2014 at 2:35 AM
from ygn age 20 role ver ph 09254025209
shing ran August 27, 2014 at 11:20 AM
VeVe. Ooredoo December 8, 2016 at 11:34 PM
Anonymous February 15, 2014 at 2:30 AM
ကျွန်တော်လည်းsexလုပ်ချင်နေတယ် လုပ်ချင်သူများ ၀၉၄၂၀၀၁၉၂၄၂ ကိုအပ်လိုက်ပါ
Anonymous February 21, 2014 at 3:30 AM
09250581420 ကိုနိင် ခံမယ်ဆိုဆက်သွယ်လိုက် လီးက ၆လက်မစွန်းတယ် မြောက်ဥကလာကပါ ၂ ဈေးမှာနေတယ်
Anonymous February 19, 2014 at 1:00 AM
mdy.bot.boy@gmail.com ko add par...Yote ma soe par .. girlrish ma pyit par ...bot par
Anonymous March 27, 2014 at 3:16 AM
Myitkyina က ပါ။
h m ပါ။ ph no ပေး ထား ။
hidden sithu October 11, 2015 at 6:21 PM
No. 1,5 ,7တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိုချင်တယ်
hnaung moe November 23, 2014 at 9:15 AM
kaungsit December 15, 2014 at 11:46 AM
kaungsit December 15, 2014 at 11:47 AM
Naing Tun September 18, 2015 at 10:24 AM
09979475124 mdy t
koko March 17, 2015 at 4:28 AM
ph no.ပေးေ mdy က
thihabhoon thwe July 1, 2015 at 9:43 AM
min khant moe October 1, 2015 at 8:03 AM
Anonymous November 4, 2015 at 2:53 AM
မိုးညှင်းမှာဆိုလည်းလာထား ရှိရင်​ ၀၉၉၆၀၀၅၈၄၈၀ကိုဆက်​လိုက်​
thuyamin May 24, 2016 at 7:40 AM